Database Dịka Ọrụ (DaaS)
Izu ole na ole gara aga, enwere m obi ụtọ ige ntị na ExactTarget Chief of Operations, Scott McCorkle, na-ekwu maka mgbanwe nke ikpo okwu ha. Edeela m n'oge gara aga na m kwenyere Ndị na-enye ọrụ email agbagola shark ahụ - ọ na-egosikwa na ndị ESPs na-eche echiche enweelarị ederede.
Scott gwara okwu ExactTarget bụ Hubzụ ahịa maka ụlọ ọrụ. Kama ịbụ naanị igwe na-eziga ozi email, ExactTarget na-akwalite ịbụ nchekwa data nke ndekọ maka ọtụtụ ndị ahịa ya na ebumnuche ndị a:
Nchikota data na nnweta - site na API zuru oke, mgbatị data siri ike na nchekwa, akụrụngwa siri ike, ọ ga-ekwe omume ugbu a maka ụlọ ọrụ ịnabata ma jiri ExactTarget dịka nchekwa dị mma, na-ekwenye ekwenye maka ịchekwa data ndị ahịa ha.
Iwu maka mkpa - n'ihi na ExactTarget na-ebunye ozi site na email, olu, SMS na mgbasa ozi mmekọrịta, enwere ike ijide data omume, chekwaa ma tinye ya iji melite mkpa izi ozi maka ndị ahịa ahụ.
Nzipu nke Nkwukọrịta - ExactTarget nwere sistemụ njikwa njikwa ọpụpụ na ụlọ ọrụ na ngwa ngwa OEM ha na-agbawa n'ihi arụmọrụ nke sistemụ. Tụkwasị na nke a bụ Voice, SMS na, mgbe ịzụrụ CoTweet, ikekwe izi ozi mgbasa ozi.
Ihe niile - ExactTarget na-achọ iji mezue gburugburu site na ịnye ihe siri ike na nkwukọrịta niile na-aga.
A na-ahụkarị data ịchekwa data dị ka eke maka sọftụwia dịka Ọrụ Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) ọrụ, mana ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agagharị ugbu a. Ndị nyocha nchịkọta, Webtrends, amalitela ha Onye nleta Data Mart, na-enye ohere maka ịdọrọ na dobe nkewa nke etinyere ozugbo na ngwaahịa a. Webtrends nwere ezumike kacha elu API na, tinyere injin Nchịkọta na-eduga, na-akwado data nchekwa data nke ndị ahịa gị na Webtrends na-enye ndị ọkaibe ọkaibe ụfọdụ ngwaọrụ dị ike iji dozie ma tụọ nkwukọrịta.
Database dị ka Ọrụ bidoro afọ ole na ole gara aga na ndị na-eweta dị ka Amazon na Google na-enye ọdụ data mmekọrịta dị mfe edobere na igwe ojii. Nke ahụ dị mma, mana na-enweghị ngwa iji kwado data ahụ, ụlọ ọrụ ahụ enwebeghị nnabata nkwado dịka ndị mmadụ chere na ọ ga-eme. Uru ụlọ ọrụ dịka ExactTarget na Webtrends nwere bụ na ha gosipụtara nkwukọrịta yana nchịkọta ngwaahịa dịlarị n'elu ndị DaaS.
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ a niile nwere njikọta siri ike na ibe ha, ọ dị ka ọ ga-adịrị ha mpi ịghọ isi mmalite nke data ndị ahịa. Ecommerce, CRM, Email na Analytics na-eweta ihe niile ga-agbanye aka ịghọ nchekwa data nke ndekọ na n'oge na-adịghị anya, ha ga-enye ọrụ iji chekwaa data gị, nye ozi siri ike na nchịkọta maka data gị. Onye nwere data nwere onye ahịa - ya mere SaaS ndị na-enye ọrụ ka ha ghọọ Ebe nchekwa dị ka ndị na-enye ọrụ ga-agbawa na afọ na-esote. Nke a bụ usoro dị ukwuu maka ndị na-enye SaaS ebe ọ bụ na ịkwaga ma ọ bụ hapụ onye na-eweta gị ga-esiwanye ike ozugbo ha na-akwado ebe nchekwa data gị!
Tags: ngwaChọtagoogle tinyere baajịakwụkwọ ahịaime nnyochaChọọ MarketingAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yaamamiheweta